N'ogbe Clamps / clip maka ígwè grating emeputa na Supplier |Jintai
Aha ngwaahịa:Mkpọchi/mpịakọta maka grating ígwè
clip na-arị elu
oghere etiti nke obere clip
Ogologo obere clip
Clamps na-etinye nke nchara grating nwere ụzọ abụọ: welded fixing na clip fixing.Idozi welded na-emetụta akụkụ ndị na-adịghị mkpa ịkwatu, dị ka ikpo okwu gburugburu akụrụngwa.Na ịnakwere ndozi clip nwere uru dị mfe idozi na ịkwatu, ọ gaghịkwa ibibi mkpuchi zinc.
Mpempe akwụkwọ ahụ na-emetụta ụdị grating nchara niile, ọ bụ nke M8 bolt, obere clip na obere obere ala.Usoro nke idozi welded: N'ebe dị larịị nke mbụ nke akụkụ ọ bụla, ahịrị ịgbado ọkụ n'akụkụ ga-abụrịrị ihe karịrị 20mm ogologo na 3mm dị elu.Usoro nke clip fixing: Enwere ma ọ dịkarịa ala 4 clips na ọ bụla mpempe ígwè grating, banyere nnukwu span ígwè grating, ọ ka mma iji ọzọ clips.
Dị ka arịrịọ onye ahịa si dị, anyị nwere ike ịnye ihe nchara dị nro nke galvanized na obere igwe anaghị agba nchara. Mgbe ị na-enye iwu vidiyo, biko mara ụdị clip, ọnụọgụ na ihe onwunwe.
Ihe/Ụdị: Mpempe akwụkwọ grating / mkpọgide ugboro abụọ
Ihe Ọkwa: Igwe anaghị agba nchara, Carbon Steel, Igwe anaghị agba nchara 304/316
Ngwucha: Ngwucha igwe, Hot Dip Galvanized, Akpụchapụrụ
Dabara Ụdị Grating Bar: Welded, Press-locked, Swaged, Riveted (Carbon Steel, Stainless Steel & Aluminium)
Dabara n'elu ụlọ mmanya dabara: Serated & anaghị echekwa ya
Dabara spacing mmanya/C2C dabara: Dị ka achọrọ
Dabara Ọkpụrụkpụ/Omimi/Elu: Dị ka achọrọ
Ịkụ ala: Ọ dịghị mkpa
Gụnyere: obere vidiyo, M8 Allen bolts & akụ
Ọnụọgụ akwadoro: Ebe ọ bụla achọrọ
A na-ekpebi ihe dabara adaba nke oghere mmanya na-ebu ihe site na mkpachị sadulu dị n'elu, yabụ anyị nwere ike ịgbanwe mkpachị saddle dị iche iche iji dabara oghere dị iche iche.
A na-eji obere ihe ndozi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ galvanized eme ihe maka idozi nchara nchara nke ọma na ogwe nkwado.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na nha nchara nchara bụ ihe na-erughị 1000 * 1500mm, na-ejikọta 4 pcs na-edozi mkpachị maka grating ígwè, ma ọ bụrụ na nha nke grating ígwè dị ukwuu, a ga-agbakwunye ọnụ ọgụgụ nke clips na-edozi ya.
Biko tụọ ha dịka qty nke grating ígwè si dị.
Steel Walkway ntupu, Ogwe ụzọ nchara nchara, Steel ntupu grating, Ogwe ala nchara nchara, Steel Grid ntupu ala, Igwe meghere ntupu ala,